ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊သိန္နီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် – Ministry of Union Government Office
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊သိန္နီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၂
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၆၈.၉၈
ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄°C)
နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ မုန်းဝန်း၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ ဝ၊ မြောင်စီး၊ လွယ်လ၊ အခြား
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၁၆၂၇
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၁၅၅၈
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၉၁၄၄
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၉၁၄၅
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၃၉၂
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၅၄၆
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း ၁၈
အဓိကစီးပွားရေး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- စပါး၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း)
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ ၁၁၄၅ (၂%)
ပေ(၁၈၀)အထက်၊ ပေ(၅၀-၁၈၀)၊ ပေ(၅၀)အောက် တံတားစုစုပေါင်း (၁/၅/၂၉၀)
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း ဟိုတယ်(၁)၊ တည်းခိုခန်း(၂)
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ –
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) (၁/၁)
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း –
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ ကျောင်းဟာရွက်၊ စင်မိန်းခေါင်၊ ဟော်ကုန်း၊ ဝပ်စေကျောက်(ဝ်)၊ ဟိုမိန်းကံ့ကော်စေတီ၊ ဝပ်စရီးစွမ်ခမ်း
အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Prak Sokhonn နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း(၇)ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပ
1 ရက် ago
နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒုတိယနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
2 ပတ် ago
နိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် 607
Shown on Home Slider 11
ဇူလိုင် 2022 (3)
ဇွန် 2022 (11)
မေ 2022 (9)
ဧပြီ 2022 (4)
မတ် 2022 (2)
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2022 (4)
ဇန်နဝါရီ 2022 (3)
ဒီဇင်ဘာ 2021 (12)
နိုဝင်ဘာ 2021 (2)
အောက်တိုဘာ 2021 (9)
ဩဂုတ် 2021 (2)
ဇူလိုင် 2021 (1)
ဇွန် 2021 (1)
မေ 2021 (3)
ဧပြီ 2021 (1)
မတ် 2021 (1)
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2021 (2)
ဒီဇင်ဘာ 2020 (2)
နိုဝင်ဘာ 2020 (1)
အောက်တိုဘာ 2020 (2)
မေ 2020 (28)
ဧပြီ 2020 (579)
© Copyright 2022, All Rights Reserved | MOUGO
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲစာရင်းကို UEC Website ဖြစ်သော www.uec.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်
ဇူလိုင် 27, 2020
ဩဂုတ် 2, 2021
မေ 12, 2021
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 9, 2022
မေ 10, 2021
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၇၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မင်္ဂလာအမှတ်တရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ ရေးရာဌာန၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ မွေးနေ့ ပွဲကျင်းပခြင်း
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
မတ် 26, 2020
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်သန်းသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဘူဆန်မြို့၌ ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံ – ကိုရီးယား ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု တီထွင် ဆန်းသစ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – စောစော”ပြော”၊ စောစော “သိ” ၊ အားလုံး အကျိုးရှိ
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ။ ၉. ၅. ၂၀၁၉၊ မကွေး။
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့်တွေ့ဆုံ
© Copyright 2020, All Rights Reserved | MOUGO
ရုံးလိပ်စာ: ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ ပြည်​ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ​နေပြည်​တော်
ဖုန်းနံပါတ်: ၀၆၇-၃၄၀၈ ၆၂၉ | အီးမေးလ်: mougoministeroffice@gmail.com